Nezve-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co., Ltd.
Hunan Zhonggu Science uye Technology Co., Ltd. yepamusorosoro bhizinesi rekubatanidza R&D uye kugadzira kweanotengesa michina, yekunyepedzera ungwaru, Internet yezvinhu, gore masevhisi, hombe data, nharembozha, vending muchina software uye Hardware kuvandudza uye kugadzirisa.Iyo yepasi rose O2O bhizinesi mhinduro mupi. Iyo piyona weInternet + yekuzvishandira-yekutengesa + yechinyakare bhizinesi cheni modhi pasi pegore rakarongeka nharaunda. Nesimba rayo rakasimba rekambani uye padanho rehunyanzvi, Zhonggu inoshandiswa munyika dzinopfuura zana nenzvimbo.
ZOOMGU ikozvino ine anopfuura mazana maviri emamirimita emamirimita ezvivakwa zvefekitori, uye parizvino yakagadzirisa zvinhu zvinopfuura mamirioni mazana mashanu ema Yuan uye imwe chete-yekuchinja inokwana mazana matatu emamayuniti / gore.Sezve hombe-nyanzvi nyanzvi yekutengesa muchina mupasi, Zoomgu ane yakasimba jira simbi midziyo uye zvinobuda, uye akawanda ekugadzira mitsara akagadzirwa-akagadzirwa. Iyo ine yakazara-otomatiki inochengetedza zvakatipoteredza-inoshamwaridza spraying tambo, yekupedzisira gungano mutsara, U-ganda otomatiki gungano mutsara, uye inopupuma otomatiki gungano mutsara. Sheet simbi yekugadzira mutsara, jekiseni kuumbwa kwekugadzira mutsara.